CHEETAH -MYANMAR WEEKLY REPORT -27/09/2017 — Steemit
CHEETAH -MYANMAR WEEKLY REPORT -27/09/2017steemCreated with Sketch.
cheetah-myanmar (43) in myanmar •2years ago
Cheetah-Myanmar သည် မြန်မာလူငယ်တို့၏တိုးတက်ရာ ဖြစ် သော Steemit Platform တွင် Myanmar Steemit community မှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား မလိုက်နာသော အကောင့် များကို သတိပေးရာနေရာဖြစ်ပါသည်။ ထို့ အတူ cheetah-myanmar မှ resteem ပြုလုပ်ခံရသောpost များသည် ဝမ်းသာစရာမဟုတ် , စည်းမျည်း စည်းကမ်းနှင့် မကိုက်ညီသော post များဖြစ်ကြောင်း သိစေအပ်ပါသည်။ မြန်မာ newbies များ ဝင်ရောက်လေ့လာ၍ မည်သို့ သော post များ cheetah ထိတတ်သည်ကို ပညာယူစေချင်ပါသည်။
@kta မှာ copy ယူထား၍ original cheetah ထိထားပါသည်။ သူ၏ အခြား သော post မှာ လည်း copy ယူထားသဖြင့် cheetah - Myanmar မှ ဝင် ရောက်သတိပေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
@sunminhtun နှင့် @henryba တို့ မှာ မိမိတို့ cheetah ထိထားသော post များအတွင်းရှိစာသားများကို ၇ ရက် မပြည့် ခင် ဖျက်လိုက်နိုင်သော်လည်း cheetah comment များကို တော့ ဖျက်ခွင့် မရှိပါ။ ထို့ ကြောင့် အသစ် ရောက်လာသော သူများအား အထူးသတိပေးလိုသည်မှာ Steemit Platform တွင် မိမိ ပြုလုပ်လိုက် သော အမှားများ အတွက် edit ရှိ သော်လည်း delete မရှိသည်ကို သတိထားစေလိုပါသည်။
@hlamyothet မှာ Facebook ပေါ်မှ အများသူငှာ ၏ post များကို ပြန်လည် ပြင်ဆင် ပြောင်းလည်း၍ တင်ထားခြင်းသာဖြစ်သဖြင့် MSC မှ မည်သို့ သော copy များကို လက်မခံနိုင်ပါ။ MSC အနေဖြင့် promotion တင်သူများကို မိမိ ၏ ကိုယ်ပိုင်အရေးအသားဖြင့် သာ promotion တင်ကြရန် အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးခဲ့သလို promotion ပါပြီ နောက် ယခု လို Myanmar-cheetah မှ အခြားသူများထံမှ copy ကူးထားကြောင်း တွေ့ရှိလျင် ရာသက်ပန် promotion တင်ပိုင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာထားပြီး ဖြစ်သည်။ @hlamyathet အနေဖြင့် ယခင်က promotion များတွင်ရရှိ post များအား copy မဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြရန် ဤ cheetah-မြန်မာ post အောက်တွင် အများသူငှာ သိသာစေရန်လုံလောက်သော ဖြေရှင်းချက်ကို comment ဖြင့် လာရောက် ဖြေရှင်းပါရန် အသိ ပေးလိုက်ပါသည်။
ယခုကဲ့သို မြန်မာ tag အောက်တွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ညီသော post များ ပုံမှန် promotion ရကြသော်လည်း အထက်ဖေါ်ပြပါ post များကြောင့် original ဆောင်းပါးရေးသားသူတို့ မထိခိုက်ကြစေရန် cheetah-Myanmar မှ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤ တွင် promotion ပေါ်သို့ post များတင်၍ SBD ရရှိရန် အများသူငှာများနည်းသူ ကြိုးစားနေချိန်တွင် MSC Admin team မှာ လူသစ်များကို အတတ်နိုင်ဆုံးဖေးမှ၍ လက်တွဲခေါ်နေကြပါသည်။ သူတပါး ကြိုးစား၍ Steemit Platform ပေါ်သို့ လျှောက်လှမ်းနေချိန်တွင် copy post များဖြင့် မလိမ့်တပတ် ဝင်ရောက်နေရာယူ ခြင်းကို Myanmar Steemit Community မှ မည်သို့ မျှ လက်မခံနိုင်သည့် အပြင် ကြိုစားနေသူတို့ အကျိုးကိုကြည့်၍ copy past အကောင့် များကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံသတိပေးလိုက်ပါသည်။
myanmar steemit cheetah
2 years ago by cheetah-myanmar (43)
Steemit စလုပ်တော့ cheetah ဆီလာတဲ့ စာဆို အရမ်းမုန်းတာ
Myanmar Cheetah ကို ကြိုဆိုပါတယ်
mgmgaung (49) ·2years ago
domelay (62) ·2years ago
မြန်မာ steemit ကောင်းကျိုးအတွက် ပိုပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေ ဆရာ cheetah
komoezaw (61) ·2years ago
cheetah-myanmar ကို အားပေးလျှက် 👏👏👏👏👏👏👏👏
good job , brother
Very good job cheetah-Myanmar ,trust you
minsoenaing (62) ·2years ago
တကယ်တော့ cheetah ဆိုတာ သစ်ကြုတ်ပါ
mgmgkse (55) ·2years ago
honeysara (62) ·2years ago
copy ကူးတဲ့သူ​တွေက steemit မှာရပ်​တည်​ဖို့မလွယ်​ပါဘူး။
@cheetah-myanmar ကို ​ထောက်​ခံပါတယ်​ ။
pearlwhite (50) ·2years ago
Myanmar Steemit Community အတွက် Cheetah-Myanmar ရှိနေတာ ခွန်အားတစ်ရပ်ဖြစ်သလို၊ အမှန်တရားတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လေးစားပါတယ်။
kachinhenry (66) ·2years ago
Good Job Cheetah-Myanmar ......
pyaesonekhinkhin (63) ·2years ago
kyawhlaing (59) ·2years ago
Good Job @cheetah-myanmar
aungzawhtwe (62) ·2years ago
ကောင်းပါတယ် ဆရာ cheetah ခင်ဗျာ အပင်ပန်းခံကာ ရေးသားနေပူများကြားမှာ အလွယ်တကူ ကူးယူနေသော လည်းတွေ့မြင်နေရပါတယ် ကျေးဇူးပါခင်ဗျ
This post has been ranked within the top 80 most undervalued posts in the first half of Sep 27. We estimate that this post is undervalued by $10.73 as compared toascenario in which every voter had an equal say.
aungsihein2 (44) ·2years ago (edited)
ကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်လို့ သဘောကျတယ်ဗျာ ။
ahkhayar (50) ·2years ago
htwegyi (61) ·2years ago
Congratulations @cheetah-myanmar! You have receivedapersonal award!
Congratulations @cheetah-myanmar! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @cheetah-myanmar! You receivedapersonal award!